Ukuhlanza okulula nokuqaqa umshini we-pack washer grader packer
Ngokuthuthuka kwezindinganiso zokuphila nokwandiswa kokuvikelwa kwemvelo kanye nemiqondo yezempilo, abathengi banezidingo eziphakeme kakhulu zekhwalithi lamaqanda. Izidingo zesuphamakethe zamaqanda anophawu lukhula kancane kancane. Amaqanda angacutshungulwa azokwaliwa ...
I-MINTAI umshini wokupakisha wokuwasha amaqanda osezingeni eliphakeme uthengisa kahle ngokusebenza kwawo okuhle
ngomphathi ku 21-03-16
I-MINTAI umshini wokupakisha wokuwasha amaqanda osezingeni eliphakeme uthengisa kahle ngokusebenza kwawo okuhle, ukwakheka okuguquguqukayo nokuhlelwa okuphezulu. Senza kangcono kuyo yonke imininingwane yomshini. Umshini we-pack grader packer usiza amapulazi noma izimboni ezisebenza ngamaqanda ukonga izindleko ezinkulu zabasebenzi, okubalulekile ...
Ingabe umshini wokuwasha amaqanda muhle? Kungani usebenzisa umshini wokuwasha amaqanda?
Umshini wokuwasha amaqanda awusindisi nje kuphela umsebenzi, kodwa futhi unciphisa nezinga lokwephuka kwamaqanda. Izinzuzo zezomnotho ziyabonakala. Ukuwasha, ukomisa, nokufaka ikhandlela kwenza inqubo yokucubungula amaqanda ivalelise esithombeni sendabuko sokungcola nokungcolile, futhi imikhiqizo ihambisana kakhulu nesimanje ...
Yini imisebenzi ye-grader yeqanda?
I-grader yeqanda isebenzisa inethiwekhi yayo yezimboni ukucubungula amasiginali ukuyilawula. Ngoba inethiwekhi enjalo igwema ukusetshenziswa kwenani elikhulu lezintambo futhi inikezela ngohlelo lokuzihlola oluhlangene nolokuxilonga, iqinisekisa ukusebenza okuphephile nokwethembekile komshini. Umshini wokugaya amaqanda ufaka phakathi ...
Isifinyezo Sombukiso WangoSepthemba
UMBONO WOKUXHUMANISA IZILWANE ZESHUMI NESISHIYAGALOMBILI (2020) Kulo Mbukiso, silungiselela imishini emibili edokodweni lethu. Ukubekwa kweqanda nomshini wokupakisha Into Inombolo.: MT-101-3 Igama: Ukufakwa kweqanda nomshini wokupakisha Ipharamitha Eyinhloko 1. Amandla: iqanda elingu-25000-30000 ngehora 2. Xhuma nomugqa weqoqo ophakathi noma iqanda ...
Uhlelo lombukiso lwangoSepthemba
UMBONO WOKUPHATHWA KWEZILWANE ZESHUMI NESISHIYAGALOMBILI (2020) CHINA, owaziwa ngeCAHE emhlabeni wonke, obanjwa kusukela ngoSepthemba 4-6 kodwa emadolobheni ahlukene minyaka yonke, ungumbukiso wemfuyo omkhulu kunayo yonke e-Asia! I-CAHE ingaba yipulatifomu ephelele kunazo zonke ongayazi ngamaShayina ...
Fuzhou Mintai Imishini iqanda peeler umshini kanjani ungenzi kabi amaqanda?
Amaqanda wetiye, amaqanda afakwe olwandle, amaqanda abiliswe kanzima, njll. Esiwadla kaningi kudingeka ahlutshulwe, ngakho-ke, amaqanda amaningi adinga isikhululi samaqanda. Ngakho-ke i-sheller yeqanda leFuzhou Mintai Machinery ayilimazi amaqanda kanjani? Ngikholwa ukuthi abantu abaningi banelukuluku lokwazi ngalokhu. Wonke umuntu kumele ngabe udle amaqanda, wh ...
Ungazinciphisa kanjani ngempumelelo izindleko zokusetshenziswa komshini wokuwasha amaqanda?
Ungazinciphisa kanjani ngempumelelo izindleko zomshini wokuwasha amaqanda. Umshini wethu wokuwasha amaqanda unesakhiwo esiqinile, ukusebenza okuzinzile, akukho ukuminyana kweqanda, akukho ukuwa kweqanda, impilo yenkonzo ende. Ngebhulashi le-nylon elikhethekile, ukuhlanzwa kokuhambisa okuzenzakalelayo, okutholakala ngokuphelele ekusetshenzisweni kokulayishwa kweqanda ...
Abakhiqizi Bomshini Wokuphula Amaqanda, Okuzenzakalelayo Egg Breaking Machine, Umshini Wokubamba Amaqanda,